Horn Cable TV - Wikipedia
File:Home cable tv hargeisa.svg
Horn cable tv hargeisa Waa tv madaxbanaan oo xaruntiisu tahay magaalada madaxda Somaliland ee Hargaysa Telefishanka Madaxa bannaan ee Hargeisa Cable Tv (HCTV) oo hadda loo bixiyey Horn Cable Tv ayaa galay Satellite-ka, iyada oo laga daawan doono dunida oo dhan, sidaana waxa lagaga dhawaaqay xaflad ballaadhan oo saaka lagu qabtay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Xafladda loo sameeyey ballaadhinta adeegga warbaahineed ee Telefishanka HCTV, waxa ka qaybgalay, Madaxweynekuxigeenka Somaliland, mudane Axmed Yuusuf Yaasiin, Guddoomiyayaasha labada xisbi ee mucaaridka ah UCID iyo KULMIYE, Shirguddoonka Golaha Wakiillada, Wasiirka Duulista Hawada, Kuxigeenka Duqa Caasimadda Hargeysa, qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee dalka, xildhibaanno ka tirsan Golaha Wakiillada, xubno ka socdey ururrada Bulshada, suxufiyiin, aqoonyahanno iyo marti-sharaf kale. Waxaana si baaxad leh looga hadlay saxaafadda Somaliland iyo doorka ay kaga jirto dhismaha iyo horumarinta qaranka iyo weliba xaaladda siyaasadeed ee dalku haatan marayo. Masuuliyiintii xafladdaasi ka qaybgashay ayaa ku bogaadiyey mulkiilayaasha maalgeliyey Telefishankan oo dunida oo dhan laga daawan doono, iyaga oo sheegay inuu wax weyn ka tari doono qaddiyadda Somaliland. Xasan Cumar Hoorri oo u hadlay maamulka iyo mulkiilayaasha Telefishanka Horn Cable Tv ayaa sharraxaad ka bixiyey adeegga uu soo kordhiyey Telefishanku, meelaha laga heli karo iyo barnaamujyadiisa, waxana uu hadalkiisa ku bilaabay; “Wakhtigan aynu ku jirno waxaa loo aqoonsaday “Waayahii Xogta” (Information Age) iyadoo ay muuqato xawliga warbaahintu isaga xawaaraynayso daafaha dunidan edegeysan (Globalization), isla markaana, waxa muuqato saamaynta warku ku leeyahay bulshoweynta caalamka. Run ahaantii, Xilligan oo loo tartamayo kasbashada dhegta, isha iyo maanka daawadaha, ama dhegeystaha, sidoo kale akhristaha, warbaahintu waxay kaalin mug leh ku leedahay nabadda iyo colaadda, horukaca iyo dib-u-dhaca, aqoonta iyo aqoon-xumada iyo wax kasta oo ummadda raadayn ku leh.
Haddaba, Khadka Telifishanka Geeska (Horn Cable TV) oo hore u ahaan jiray Khadka Telifishanka ee Hargeysa waxa uu ka asaasmay magaalada Hargeysa, bishii June 2003. Telifishanka oo hore u ahaa telifishanka keliya ee bulshada reer Hargeeysa u fidiya adeegyada hal gacan (channel) oo Afsomaali ah iyo 19 channel oo laga dheehan karo xulka baahinta heer caalami sida wararka CNN, BBC Foxnews iyo Al-Jaziira, Gacamada Aqoonta sida Dunida Xayawaanka (Animal Planet), Degaanka (National Geography), iyo Show Time oo si toos ah u soo tebiya Ciyaaraha iyo tartamada koobabka heer caalami, sidoo kale, dhowr channel oo u gooniyoobay maaweelada caruurta, filimada, maararowga iyo dhaqamada.
Mar kale, HCTV waxa sharaf u ah in uu bulshada u soo bandhigo adeeg la jaanqaadaya waayaha maanta ee warbaahinta tirotiraysan (Digital Media) tasoo loo adeegsanayo qalab casri ah, xirfad iyo aqoon tayeysan iyo lalista dayaxgacmeedka.
Cirlalinta gacankan oo Afsomaali ah waxa loo qaabeeyey u adeegista in ka badan 1.5 malyuun daawade oo isugu jira bulshoweynta qoomiyadaha Somaaliyeed ee ku sugan Geeska Afrika, iyo qurbajoogga ku filiqsan qaaradaha Afrika, Aasiya, Europe, Australia iyo Waqooyiga America. Gacankan oo laga dheehan doono Dayax-Gacmeedka Thaicom 5, mawjadda (Frequency) 3551 V iyo tilmaamaha (Sympol rate) 13333. waxa ka bixi doona warar sugan oo daray ah iyo barnaamijyo tayo leh 24/7 (maalin kasta 24ka saacadood) iyada oo lagu daawan karo lacag la’aan.
waxaan u sheegayaa dadkii ku tuhmaayey in jamaal cali xuseen uu ka yahey mulkiile inaanu ka aheyn booskii jamaalna uu galey xirsi oo aad iskugu dhow yihiin farxaan
Adeegyada[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Haddaba si loo kabo dhaqaalaha baaxadda weyn ee hawshu ku socoto, HCTV waxa uu macaamiishiisa u fidinaya adeegyada:
Qiimaynta iyo ka talo bixinta arimaha suuqgaynta iyo xidhiidhka bulshadda
Samaynta fariimaha xayaysiisyada iyo baahintooda
Daba galka samaaynta fariintaadu macaamiishaada ku yelatay ka dib marla la baahiyo
Qabashada seminarada la xidhiidha horumarinta baayacmushtarka, sida taba barka shaqaalaha iyo horumarinta baayacmushtarka.
· Sidoo kale, waxaa adeega shirkada ka mid ah ‘Ardaaga Mareegta shirkadda’ (www.hctv.info) oo isagana u dhisan qaabka fadhiisin warbaahineed (news portal) kaas oo leh mug iyo soo jiidasho loo hiloobaya.
Telifishanka waxa uu bulshoweynta ka haqabtiri doonaa wararkii Geeska oo sugan, barnaamijyo tayo leh iyo dooddo gar cadaawe ah. Waxa mabda’ noo ah dhexdhexaadnimo, hubsiimo, saamayn, hiddo-samaan iyo tayo-wanaag.
Ugu danbeyntii, mudanayaal iyo marwooyin, waxad noogu soo hagaagi doontaan madal uu ka dhismo qaranku, goob uu ka koro ganacsigu iyo wadiiqo loo mari karo hanashada maanka iyo maskaxda bulshada”. Telefishanka HCTV, waa telefishankii labaad ee Somaliland ee Satellite-ka laga daawado, iyada oo uu dhowaan isaguna galay Satelliteka telefishanka Somaliland Tv oo hadda la baxay Somaliland Space Channel. http://www.hctv.info/  http://slntv.magnify.net/video/Somaliland-National-TV-SLNTV-Ha
Sido kale firri[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn_Cable_TV&oldid=195386"
Maxamuud axmed cali
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Sebteembar 2019, marka ee eheed 16:57.